ဘိုင်အိုမက်ထရစ် နည်းနဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် ၄ သိန်း မှတ်ပုံတင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဘိုင်အိုမက်ထရစ် နည်းနဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် ၄ သိန်း မှတ်ပုံတင်
ဘိုင်အိုမက်ထရစ် နည်းနဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် ၄ သိန်း မှတ်ပုံတင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းရောက် မွတ်စလင်တွေဟာ မှတ်ပုံတင်ဌာန ၁၀၀ မှာ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ဘိုင်ဘိုမက်ထရစ် နည်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်နေကြတာ ၄ သိန်းရှိပြီးလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးဌာနရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်တပ်တို့ အကူအညီယူပြီး ဘိုင်အိုမက်ထရစ် နည်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်အိုမက်ထရစ် မှတ်ပုံတင်မှုဟာ တစ်လအတွင်း ပြီးစီးနိုင်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးသူ ၆ သိန်း ၇ သောင်း ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
……………………. ။ ။ …………………….
ဘိုငျအိုမကျထရဈ နညျးနဲ့ မှတျစလငျ ဒုက်ခသညျ ၄ သိနျး မှတျပုံတငျ
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးရောကျ မှတျစလငျတှဟော မှတျပုံတငျဌာန ၁၀ဝ မှာ မနကျ ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအတှငျး ဘိုငျဘိုမကျထရဈ နညျးနဲ့ မှတျပုံတငျနကွေတာ ၄ သိနျးရှိပွီးလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နယျခွားစောငျ့တပျဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ထုတျပေးရေးဌာနရဲ့ ကွီးကွပျမှုနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နယျခွားစောငျ့တပျနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ စဈတပျတို့ အကူအညီယူပွီး ဘိုငျအိုမကျထရဈ နညျးနဲ့ မှတျပုံတငျနတော ဖွဈပါတယျ။ ဘိုငျအိုမကျထရဈ မှတျပုံတငျမှုဟာ တဈလအတှငျး ပွီးစီးနိုငျတယျလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အရာရှိတှကေ ပွောပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနေ့ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှုတှေ အပွီး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျ ထှကျပွေးသူ ၆ သိနျး ၇ သောငျး ရှိတယျလို့ ကုလသမဂ်ဂက ထုတျပွနျထားပါတယျ။
Previous articleမြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည်တွေကို ဂျပန် လေထဲမှာတင် ပစ်ချနိုင်တယ်လို့ သမ္မတ ထရမ့်ပြော
Next article2017 NOVEMBER6MONDAY BUSINESS TODAY